Veloma ary fialamboly tsara amin'ny marketing amin'ny 2013 | Martech Zone
Nifoka ho anao ve ity taona ity? Nahasoa ahy izany. Taona sarotra izany satria namoy ny raiko aho, nijaly ny fahasalamako, ary nidina ambany ny fandraharahana - anisan'izany ny fisarahana amina namana sy mpiara-miasa lehibe iray. Ianareo olona mamaky ny bilaogiko raha mila fampahalalana momba ny varotra ka tsy te hifantoka amin'ny olana hafa aho (na dia nisy fiatraikany lehibe aza izany), te hiresaka mivantana amin'ny Marketing sy Marketing Technology aho.
Ny varotra tamin'ny taona 2013 nonoina
Nandany ny taona iray manontolo izahay hamerenako ireo olona tsara amin'ny paikady voaporofo, mahomby, maro fantsona. Ireo zavatra mamirapiratra tamin'ity taona ity dia n'aiza n'aiza. Ny mpanjifanay dia nanetsika vola ary nanambola tamin'ny teknolojia maro tamin'ity taona ity izay nampanantena zavatra betsaka ary nanome banga. Nampiala ny fifantohana amin'ireo zavatra izay fantatray fa hiasa mandritra ny fotoana maharitra sy miaraka amina vanona. Nanipy vola sy loharanom-pahalalana tamina tetika tsy namokatra na inona na inona. Nangalatra mpanjifa taminay izy ity ary rehefa niverina izy ireo dia tsy nanana vola hanohizana izay mandeha.
Fanelingelenana, lainga ary fanerena
Nisy zavatra niova tamiko tamin'ity taona ity rehefa niresaka tamin'ny mpanjifa aho. Nanomboka nitady ny curmudgeon tao amin'ny efitrano aho fa tsy ilay bandy hevitra. Na dia nanosika fanararaotana vaovao vaovao aza aho dia nahatsapa ho toa nanafika ary mitazona olona maro tsy ho azoko. Niady izahay satria tsy niraharaha ny fironana amin'ny finday, ny fironana amin'ny horonan-tsary ary ny fahombiazan'ny atiny hatrany ny mpanjifanay.
Mahatsiravina ny tsindry anatiny amin'ireo orinasa ireo… nitaky valiny haingana, nanapaka teti-bola, ary nihena ny isan'ny mpiasa ny mpitarika. Noterena handray fanapahan-kevitra ratsy ny orinasa aorian'ny fanapahan-kevitra ratsy ary ireo orana mpihaza azy ireo dia faly kokoa nanao sonia azy ireo, naka ny volany ary namela azy ireo tsy hanan-javatra. Nandany vola tamin'ny namako maro tao amin'ny indostria ny nandao na noroahina. Heveriko fa ny antsasaky ny fifandraisako amin'i LinkedIn dia manana lohanteny vaovao amin'ny orinasa vaovao.
Fiverenana amin'ny fototra
Ity taona ity no taona ifantohana. Niverina tamin'ny fifantohany ny orinasanay amin'ny fiantohana ny mpanjifanay manana fototra ara-barotra miditra tsara arahin'antoka paikady matanjaka, paikady sosialy ary fikarohana izay manangana fahefana sy fahatsiarovan-tena ho an'ny marika. Hanohy hanampy ny mpanjifantsika izahay hampifangaro sy hampandeha automatique ny teknolojia, fa tsy hanelingelina azy ireo. Hosokafantsika izay mety sy izay tsy mandeha amin'ity taona ity.
Tsy tiako ny vinavina ka tsy hanao izany aho. Ity ny fifantohan-tsika amin'ny taona 2014 sy ny fifantohana entinay miaraka amin'ireo mpanjifanay:
Ny fiantohana fa ara-barotra an-tserasera izy ireo dia manana fototra matanjaka izay namboarina tsara fikarohana sy sosialy - fahefana manangana ho an'ny marika sy ny olona ao aoriany.
Fampiharana amin'ny marketing anatiny izay mandrefy sy mitarika mpitsidika amin'ny alàlan'ny fantsona fivarotana sy fiovam-po.
Ny fitazonana sy ny fananganana lanja amin'ny fanantenana, fitarika ary mpitsidika amin'ny alàlan'ny fizotran'ny marketing amin'ny mailaka sy ny fizotran'ny marketing.
Manararaotra fitomboan'ny finday sy fananganana azy - ao anatin'izany ny fandefasan-kafatra an-tsoratra, tranonkala finday, mailaka finday ary rindranasa finday.
Tetibola ampaham-bola ho an'ny sary, horonan-tsary ho an'ny matihanina, webinar, sns mpanelanelana amin'ny fampandraisana anjara izay manampy hanazava ireo tombony saro-bahana haingana kokoa ary hanatsara ny tsingerina sy ny tahan'ny fiovam-po.
Katsaho fotoana fanentanana izay mitarika fahatsiarovan-tena ary mahazo ny vokatray, serivisy, olona ary marika eo alohan'ny mpihaino vaovao mifandraika.
Vonona aho ny 2013 hialoha ahy ary hanomboka ny 2014! Ianao ve?
Tags: 20132014fahefanamailakataona vaovaomialohafisondrotanafihazonanaSEOSocial Media Marketing